Iwe Waigona Kuverenga Yese Post Kana Ini ... Martech Zone
Iwe Waizoverenga Humwe Post Kana Ini…
Chitatu, Ndira 23, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Wangu CEO akaripira chikamu-chenguva sosi kuburitsa iyo yekushambadzira kopi yatinoda kana isu tichiendesa yedu nyowani yekushambadzira webhusaiti. Iye munhu akamboshandirwa ane yakasimba kushambadzira kumashure asi kwete yewebhu kushambadzira kumashure - Ini ndinovimbiswa kuti ivo vanozogona kuitora zviri nyore (ndinovimba kudaro!).
Kupa imwe nongedzo, ini ndakapa iye munyori wekunyora nezvimwe zviwanikwa zvihombe pakunyora zvemukati. Imwe yezve zviwanikwa ndeyeJunta42's Zvemukati Zvekushambadzira Blogs. Ini handina kutarisa ese mablog pamazita iwayo asi ine kumwe kutendeseka kwakapihwa kwandakawana CopyBlogger on there! Ini ndichave ndichiverenga mamwe masosi munguva pfupi.
Matipi Ekunyora Kopa Saiti Yako kana Blog:
Pasina imwezve ado, heano matipi epamusoro ekunyora. Ini ndinofanira kutanga nekutaura kuti ndine mhosva yekusashandisa izvi pane ese mablog angu. Ndinovimba uchaita basa riri nani pane randakaita. Iwe chido gohoi mibayiro!
Kubata Misoro Yenyaya - kusarudza misoro yenyaya isingatarisi sepepanhau asi, panzvimbo pezvo, kukwirisa kufarira kwevaverengi sezvavanenge vachisvetuka nemhedzisiro yeinjini yekutsvaga uye vachikwiridzira maRSS feeds avo.
Chunking Zvemukati - whitespace ishamwari yedu. Kuita kuti kopi yako iverengeke… kana kuti inogona kusemesa… dzivisa ndima dzawakadzidza kunyora kukoreji. Panzvimbo iyoyo, sarudza musoro wakasimba, kana musoro wenyaya, uchiteverwa negwaro remutsara mumwe kana miviri yakasimba. Shandisa zvinyorwa zvine mabara kana manhamba.
Batanidza zvakasununguka - mukati batanidza kune zvako zvinyorwa uchishandisa mazwi akakosha anozotyaira traffic. Zvakare batanidza kunze, kusimudzira mamwe mablog ayo anokubhadhara iwe rimwe zuva. Izvi zvinosimbisa yako yekutsvaga injini indexing, zvinobatsira kuchengetedza vashanyi pane yako saiti kwenguva refu, uye inosimudzira mamwe mablog - kuisa pachena vateereri vako kune avo uye zvinopesana.
Shandisa Mazwi Akakosha uye Mitsara Makuru - kunzwisisa izvo vanhu vari kutsvaga pawebhu chinhu chakakosha kuti unzwisise kuti saiti yako ichawanikwa sei kuburikidza nemainjini ekutsvaga. Kushandisa mazwi akakosha uye mitsara yakakosha mune zvese zvemukati zvinobatsira kutyaira izvo zvirimo mumainjini ekutsvaga uye kuunza vanhu kune yako saiti vanga vachitsvaga izvo zvawakapa.
YOSE peji peji rekumhara - Vatengesi vewebhu vanowanzo taura nezvemapeji ekumhara uye vanoonekwa vakasununguka senge kwauri kunongedza mushanyi kubva kuemail kana kusimudzira. Nekudaro, sezvo zvemukati zvewebsite yako kana zvemablog zviri (netarisiro) zvakasiyana zvakanyorwa nemainjini ekutsvaga, izvi zvinoreva kuti peji rega rega rakarongedzwa zvakasiyana rinova peji rekumhara! Izvo zvakati, zvakakosha kuti iwe ubate peji rega rega sekuti muverengi haana kumbobvira aenda kune yako saiti zvisati zvaitika. Kunyanya ine blog! Pasi pegumi muzana yevashanyi vangu nyowani vanosvika kublog rangu kuburikidza nepeji rangu repamba.
Gore rakapera ndakanyora, Mira Kunyorera Kweinjini dzekutsvaga. Icho chaive chimiro chakasimba kupokana nekunyora zvemukati zvako zvekukwezva injini dzekutsvaga nekuti zvaigona kudzima vaverengi. Ndakamira pambiru iyo. zvisinei, ini ndinotenda kune chiyero kana iwe uchinyora zvako zvemukati.
Kana iwe uchikwanisa kunyora zvemukati zvako kuti vaverengi vakwanise kuzviwana, nakidzwa nazvo, UYE utore kutariswa kwemajini ekutsvaga iwe wawana chiyero chakakwana.
Tags: adzivisobanner adchrisbrossdhizaini yekugadziragoogle webmasterswebsite web designwebhusaiti optimizationwebsite optimizationkuronga webhusaiti
Kubatanidza iyo Dots
Sezvo ini Tweet pa Twitter pamwe Snitter…
Ndira 27, 2008 na10: 51 PM
Kutenda iwo matipi,
Ini handina kana kumbofunga kurapa peji rega rega senge iri repamba peji.
Zvine musoro kuti havazi vese vanopinda kubva kumba peji.